မိုးမခလူကြီးများ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 67
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၃၄) – Mar Mar Aye
မာမာအေး သြဂုတ် ၁၁၊ ၂၀၁၂ “ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရာဝယ်၊ အမှန်တကယ် ဘုံဓလေ့ဘ၀မှာကွယ်၊ သံသရာတကွေ့ တွေ့ကြပြန်ရာဝယ်” No tags for this post. Related posts No related posts.
၀င်းဖေ ၀တ္ထုတို သြဂုတ် ၁၂၊ ၂၀၁၂ ကိုမြရှင်နဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျုပ်တော့ နားမလည်တာ များပါတယ်။ ကျုပ်ကို ကြိုက်ပါတယ်လို့ စပြောခဲ့ ကတည်းက စပြီး နားမလည်ခဲ့တာပါတော်။ တော်တို့ပဲ စဉ်းစားကြည့်လေ။ ကျုပ်က ငါးသည် (ငါးသယ်)။ No tags for this post. Related posts No related posts.
မောင်စွမ်းရည်၊ သြဂုတ် ၉ ၊ ၂၀၁၂ စစ်အစိုးရဟာ ၊ အစိုးရ မစစ်ဘူး ဒီအစိုးရက အစလဲ မရိုးဘူး အလယ်လဲ မရိုးဘူး အဆုံးကျလဲ လုံးဝ ရိုးမှာ မဟုတ်ဘူး ။။။။။ လူသတ်ခိုးလု ၊ ကာမေသုနဲ့မုသားဝါဒ ၊ အကုသနဲ့ဘာကမှ မကင်း ၊ သီလသာကင်းတဲ့၊ မင်းဆိုးမင်းညစ် ဖက်ဆစ်အစိုးရ ၊ နအဖကို ယုတ်လှတဲ့အမိုက်တွေမို့ဗုဒ္ဒကြိုက်တော် မမူဘူး ။။။။။။။။ ရေ မီး မင်း ခိုးသူ...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၃၃) – Mar Mar Aye
မာမာအေး သြဂုတ် ၅၊ ၂၀၁၂ “… ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ ဂီတသမားတွေဖက်က မပြောတတ် မဆိုတတ်လို့ ဗဟုသုတရှိဖို့ စာမဖတ်လို့ ခံရတဲ့ဖက်မှာ နေရာ အရများနေကြောင်း သိနေတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲဘဲ ငယ်တုန်းက ငယ်သေးလို့ ကြီးလာတော့လဲ အားနာလို့နဲ့ အနှပ်ခံရတာတွေ ရှိလို့ပါ။ အဲဒါတွေ သင်္ခဏ်းစာ ယူပြီး စိတ်အားမတ်မတ် လူအားမတ်မတ် ရပ်နိုင်အောင် အလေ့အကျင့် လုပ်မိပါတယ်။ ဂီတလောကလုံး အကျိုးရှိစေမယ့် ဥပဒေကိစ္စကို တနေ့နေ့ကျဖြစ်အောင် ကျိုးစားမယ်…” No tags for this post. Related posts No related posts.
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၃၂) – Mar Mar Aye
မာမာအေး ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၁၂ “…ဟိုက အဆိုတော်တွေ ဓါတ်ပြားတချပ်လောက် အောင်မြင်တာနဲ့ ထိုင်စားရော့ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒီအသိ ရလာတော့ သူတို့ဘာကြောင့် ဒီလိုနေသွားနိုင်တာလဲ – စပ်စုတယ်လေ။ ဒီတော့ ရာခိုင်နှုန်းအသီးသီးနဲ့ သီချင်းလွှင့်တိုင်း ရောင်းတိုင်း သုံးတိုင်း ငွေထပ်ရတဲ့အကြောင်း၊ ကိုယ့်ဆိုနည်း ကိုယ့်သီချင်းကို နောက်တယောက်က သုံးချင်တယ် ဆိုရင်လဲ ကိုယ့်ခွင့်ပြုချက်ပေးမှ ဆိုတာတွေ အို…” သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ … ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာတုန်းက ယဉ်ကျေးမှုအမွေ “ရကန်” ဆိုပုံဆိုနည်း ဆရာကြီးစေါင်းဦးဘသန်း ဆိုပြတုန်းက အမှတ်တရ သိမ်းထားတာလေး ဖြန့်ပေးလိုက်တာပါ။ ဟိုနေ့က...
ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၅၀ ခန့်က လူထုသတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သော ကာတွန်းဖြစ်သည်။ http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8494&Itemid=121 No tags for this post. Related posts No related posts.
ခေတ်စကား၊ ခေတ်တရား၊ ခေတ်ဓား နားမလည်ရင် နားပြတ်လိမ့်မယ် လည်ပြတ်မယ် ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်၊ ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၂ ကိုးကား – Myanmar Independent News Journal – http://www.myanmarij.com/?p=4285 ဒီနေ့ ကျုပ်အသက် ၈၃ နှစ် ရှိပြီ။ နှစ်ပေါင်း ၆ဝကျော် ၇ဝ နီးပါး လောက်က အကြောင်းတွေကို တစ်ခါ တစ်ခါ ပြန်တွေးမိတယ်။ တစ်ပြည်လုံး ယူကျုံးမရ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့နေ့။ အမှောင်ကြီး ကျခဲ့တဲ့နေ့။ ကျုပ် အသက် ၁၇ နှစ်သားလောက်ရှိပြီ။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း တက်နေတယ်။ တိုင်းပြည်ကြီး ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတာ သိတယ်။ ကျုပ်တို့ တောမြို့လေးလည်း ငရဲကျပြီဆိုတာ သိတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ခေါင်း ဆောင်ကြီးတွေ လုပ်ကြံခံကြရတယ်။...
Page 67 of 78«1...6566676869...78»